Cancelkagbu, mgbanwe na nloghachi - ASFO Store
(Ọ bara uru naanị maka ịzụta emere n'ụlọ ahịa n'ịntanetị)
Iwu ga-emezughị ego ịkwụ ụgwọ nke ọma ka ụbọchị azụmahịa ụbọchị abụọ gachara.
Iji kagbuo iwu gị, ịnwere ike ịkpọtụrụ anyị site na Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị ma ọ bụ site na email na kpọtụrụ@asfo.store. Gwa anyị nzube gị, na-egosi usoro, ọnụahịa ọnụahịa na ọnụ ọgụgụ ire, ngwaahịa ịlaghachi na ihe kpatara ya.
Celkagbu ịtụ iwu ga - ekwe omume n'oge usoro nkwadebe n'usoro na tupu izipu ya, onye ahịa ya ma ọ bụ ahịa ọgwụ nwere ike ịrịọ ya enwere enwere mgbanwe ọ bụla emere ọnọdụ ekwenye na usoro ntanetị. N'ọnọdụ ebe emerelarị ịkwụ ụgwọ nke ọnụ ahịa azụmaahịa ahụ, a ga-enyeghachi onye ahịa azụmaahịa otu usoro ịkwụ ụgwọ ahụ. Ọ bụrụ na ị kagbuola iwu gị, a ga-agbanwe ọnọdụ ịtụ ahịa ka “akagbuo”.
Mgbanwe ma ọ bụ nloghachi
Ọ bụrụ n ’ụzọ ọ bụla, ihe enyere n’ihu ahụ erughi ihe ị tụrụ anya ya, ị nwere ike iweghachi ya. N'okwu a, ị ga - enwe ụbọchị 15 iji zitere anyị ngwaahịa gị maka ịlaghachi.
Returnlaghachi azụ / mgbanwe nke ihe ọ bụla kwesịrị iso ọnọdụ ndị a:
Nlaghachi azụ ga-adịrị n'ọnọdụ dị mma (ọnọdụ ire ere), yana ngwugwu mbụ a na-edepụtabeghị, na-enweghị ịnwale ma soro ọnụahịa ya. Ọ bụrụ na ngwugwu ahụ mebiri emebi ma ihe ndị ahụ gosipụtara ihe ịrịba ama ọ bụla doro anya nke iji, anyị enweghị ike ịnabata mgbanwe ya ma ọ bụ iweghachi uru ya.
Ngwa ahịa ga-esirịrị na mpempe akwụkwọ ịzụta ọ bụla.
Bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe ma ọ bụ weghachite ihe gị, ị nwekwara ike ịme ya ozugbo na ụlọ ahịa ọgwụ ka ị were were were ọnụahịa azụmaahịa ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịkpọtụrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị site na email na kọntaktị, na-agwa anyị ebumnuche gị maka ịgbanwere ma ọ bụ ịlaghachi, na-egosi usoro, ọnụahịa ọnụahịa na ọnụahịa ire, ngwaahịa ịlaghachi na ihe kpatara ya. Mgbe kọntaktị a gasịrị, a ga-enye gị ndụmọdụ ka ị gaa n'ihu mgbanwe ma ọ bụ nloghachi usoro. N'ọnọdụ ọ bụla, ị ga-eziga ihe ọ bụla na-enweghị kọntaktị mbụ, dịka a gaghị atụle maka mgbanwe ma ọ bụ laghachi.
Mgbe ị kpọtụrụrịrị Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị ma nye gị mgbanwe ma ọ bụ ntuziaka nlọghachi, ị ga-ezitere anyị ngwongwo gị nke ọma yana ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, na adreesị anyị:
Centro Comercial MaiaShopping, mpaghara 135 e 136
Anyị anaghị anabata nloghachi nke ngwaahịa ndị a: Ọgwụ, Food (gụnyere ụdị mmiri ara ehi, nri nwa, ite nri ụmụaka, wdg), aorthopaedic ihe nwere otu usoro, sọks mpịachi, ihe ọ bụla ọzọ ahaziri na ndị ọzọ ejiri akara gosipụtara dị ka ndị ọrụ ụlọ ahịa ọgwụ ịzụrụ.
Ọ bụrụ n’ịhọrọ ịgbanwe ngwaahịa, anyị na-agwa gị na:
A na-akwụ ụgwọ nzipu ozi na adreesị anyị maka onye ahịa ahụ, belụsọ ndị ahịa merụrụ site na mbugharị ngwaahịa ma ọ bụ nsogbu ọrụ aka. N'ọnọdụ ndị a, ego mmachi akwụkwọ ga-enwetara n'aka Sousa Torres SA Pharmacy. Mgbanwe ahụ ga-eme naanị mgbe egosipụtara ọkwa ngwaahịa yana nnabata na ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Ọ bụrụ na ịhọrọ nloghachi nke ụgwọ akwụrụ, anyị na-agwa gị na:
A na-akwụ ụgwọ nzipu ozi na adreesị anyị maka onye ahịa ahụ, belụsọ ndị ahịa merụrụ site na mbugharị ngwaahịa ma ọ bụ nsogbu ọrụ aka. N'ọnọdụ ndị a, ego mmachi akwụkwọ ga-enwetara n'aka Sousa Torres SA Pharmacy. Nkwụghachi gụnyere ngụkọta ọnụ ahịa (ngwaahịa na ụgwọ nzipu ozi), belụsọ na ọrụ anyị anaghị akwụ ụgwọ maka ebumnuche nke ụdị nloghachi a - n'ọnọdụ ndị a, a ga-ewepụ ego nzipu ozi na ọnụego nkwụghachi ahụ. Mgbanwe ahụ ga-eme naanị mgbe egosipụtara ọkwa ngwaahịa yana nnabata na ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ị na-anata ngwugwu ma ọ bụ ihe mebiri emebi?
N'ọnọdụ nke ngwugwu nzaghachi ahụ mebiri emebi, ị ga-achọpụta ihe dị n'ime ya n'oge nnyefe ma gwa onye na-ebu ya ozugbo, kpọtụrụ Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị.
Must ga- akpọtụrụ Ndị Ọrụ Nkwado Ndị Ahịa anyị ọ bụrụ na inwetara ngwugwu na ọnọdụ zuru oke, mana ihe ndị mebiri emebi n'ime.